Mampanantena asa any ivelany: tompona Cyber mpisoloky, nidoboka any am-ponja | NewsMada
Mampanantena asa any ivelany: tompona Cyber mpisoloky, nidoboka any am-ponja
600 000 Ar hatramin’ny 1 000 000 Ar no alainy amin’izay roboka, hoe hikarakarana ny taratasy rehetra, ahazoana asa any ivelany (Frantsa, Nosy Maorisy…). Rehefa tena zohina anefa, hay hosoka sy fisolokiana. Tratran’ny polisy, ary naiditra am-ponja vonjimaika, omaly ity tompona cyber, mpisoloky amin’ny facebook ity.
Nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora, omaly rehefa avy natolotra ny fampanoavana ity mpisoloky voasambotry ny polisy avy amin’ny sampandraharaha misahana ny « cybercriminalité » ity. Araka ny fanazavan’ny polisy, mpisoloky amina tambajotran-tserasera facebook ity lehilahy ity izay tompona cyber iray eto an-dRenivohitra. Ny polisy avy ao amin’ny sampandraharaha misahana ny « cybercriminalité » no nahasambotra azy, ny 6 mey 2019 lasa teo. Fampanantenana asa any ivelany : Frantsa sy Maorisy no entin’ity mpisoloky ity hamitahana olona. Ny vehivavy no tena lasibatra amin’ity asa ratsy ity, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy hatrany. Kaonty sy groupe “facebook” maromaro no ampiasainy entiny manatanteraka izany asa ratsiny izany. Rehefa tena roboka amin’ny fampanantenany ireo izay tratrany dia asainy mamorona antontan-taratasy maro izay lazainy fa ilaina anatin’ny fikarakarana ny asa. Tsy vitan’izay fa mbola hakany vola 600 000 Ar hatramin’ny 1 000 000 Ar hoentiny hikarakarana izany antontan-taratasy rehetra izany ireo olona voasolokiny, raha ny filazany nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.
Manjavona tampoka rehefa azony ny vola…
Rehefa azony anefa io vola io dia manomboka mialangalana amin’izay izy ary manjavona tsy hita intsony mihitsy amin’ny farany. Niaiky ity mpisoloky ity fa tsy misy velively io asa ampanantenainy amin’ny “facebook” io, nandritra ny famotorana nataon’ny polisy azy. Tsy nisy akory ilay olona azon’ireo voatafika ifaneraserana any an-dafy (amin’ny alalan’ny facebook” fa izy ihany io olona io, izay entiny andrebirebena fotsiny ireo olona solokiany. Nilaza izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa olona efa manodidina ny dimy no voafitaka noho ity fisolokiana nataony ity ka nametraka fitoriana momba izao fisolokiana goavana izao teny amin’ny polisy. Fantatra izao fa mbola misy ireo olona hafa saika tratrany ka nijoro vavolombelona ihany koa. Misy antony tsara ampiasaina ireny “facebook” ireny fa misy kosa entin’ireo olona sasany hanaovana fisolokiana sy hanaratsiana olona fotsiny. Tsy vao izao no misy olona misoloky amin’ny alalan’itony tambajotran-tserasera itony fa efa hatramin’izay. Manginy fotsiny ireo mpanely tsaho sy tsy mahita atao kanefa mahita fifaliana anaty fampihorohoroana amin’ireny “facebook” ireny.